LIFEBUOY Hand Wash Mildcare 200ml – SUNNY eSTORE
LIFEBUOY Hand Wash Mildcare 200ml
LIFEBUOY Hand Wash Mildcare မှာ နို့ရည်နှင့် အုတ်ဂျုံပါဝင်သောကြောင့်အသုံးပြုသည့်အခါ မွှေးပျံ့သည့်အပြင် အခြားကျန်းမာရေးဆပ်ပြာများထက်ပို၍ အသားအရေကို ချောမွှေ့စေပါသည်။ ရောဂါပိုး (၁၀)မျိုးကို အခြားကျန်းမာရေးဆပ်ပြာများထက်ပို၍ အပြည့်အ၀ကာကွယ်ပေးပြီး ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘတ်တီးရီးယားများကို ၉၉.၉% တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများအရ Lifebuoy လက်ဆေးဆပ်ပြာရည် ဖြင့် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ၉၉.၉% ထိရောက်စွာတိုက်ထုတ်နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး Lifebuoy က ကမ္ဘာမှာ ပထမဦးဆုံး သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Offers germ protection while leaving skin feeling soft and smooth with the goodness of milk cream and oats, and is suitable for sensitive skin. More than any other health soap, it completely protects against 10 germs more than regular soaps and kills 99.9% of viruses and bacteria. In addition, laboratory tests confirmed that Lifebuoy hand sanitizer was 99.9% effective against COVID-19 coronavirus, making it one of the first brands in the world to report Lifebuoy.